Ukuphonononga ibhetri ephathekayo iMbuynow YN-035P
URafa Rodríguez Ballesteros | | Ibhetri, Ezinye izixhobo, Reviews
Kwi-Androidsis sizama kwakhona isixhobo esivela kwifemu eyaziwayo. Abahlobo UMbuynow uyaqhubeka nokuzisa iimveliso eziluncedo kakhulu kwintengiso. Kule meko sijongane nebhetri enomdla kakhulu kuba isinika ntoni, i IMbuynow YN-035P.
Ibhetri ephathekayo yi isincedisi esiba yinto ebalulekileyo xa sithatha uhambo okanye uhambo kwaye asifuni ukuyeka ukunxibelelana. Ukwazi ukuba nokuba asizifumani iiplagi sinokuba neentlawulo ezininzi kwi-smartphone yethu luxolo lwengqondo.
1 IMbuynow kunye nebhetri yayo eyi-20.000 mAh, ihlala "ivuliwe"
2 Le yibhetri yeMbuynow YN-035P
3 Izibuko lokutshaja izixhobo ezininzi ngaxeshanye
4 IMbuynow YN-035P, sukuvumela isingqisho ukuba siyeke
5 Itheyibhile yeeNkcukacha zeBhetri yeMbuynow YN-035P
6 Sebenzisa amava, izinto ezilungileyo kunye nezibi
IMbuynow kunye nebhetri yayo eyi-20.000 mAh, ihlala "ivuliwe"
Kumaxesha akutshanje sibona indlela Iibhetri ze-smartphone zinamandla okwandisa kunye nobude bexesha. Uphuculo oluxatyiswayo, kodwa olo ngezihlandlo ezithile ayonelanga kwaye ndisenendawo eninzi yokuphucula. Kude emva kwezo fowuni zihlawuliswa veki nganye.
Ukuze ube nokutshaja ibhetri kwifowuni yakho, iibhetri eziphathwayo sisisombululo esigqibeleleyo. Kodwa kuthekani ukuba sihambahamba ezintabeni iintsuku ezimbalwa? Ukunxibelelana nendalo kulungile, kodwa kukho abo basendalweni abafuna ukuhlala bexhumekile kwiinethiwekhi zabo kunye nabanye.
UMbuynow uzisa isixhobo esiza kuthi silibale malunga nokuba kufutshane nesokethi. Ngebhetri ethembisa umndilili we 7 ziibhetri ezipheleleyo kwii-smartphones zethu singazola.
I-Mbuynow YN-035P ibhetri ephathekayo lukhetho oluhle lokuhlala uqhagamshelwe naphina apho sikhona. Ngokucofa apha ungayithenga kwiAmazon ngokuhambisa simahla.
Le yibhetri yeMbuynow YN-035P
Ukuvula ibhokisi ye-YN-035P siyifumana ibhetri uqobo, un Intambo ye-USB Ngefomathi encinci ye-USB, kunye nencwadana yemiyalelo encinci kunye nemfutshane. Besingalindelanga enye into, akunjalo?
Ukuthetha ngebhetri kwinqanaba lomzimba kunokuba yinto engathandekiyo. Okwangoku siyakuxelela ukuba kunjani kwaye yintoni esinokuyifumana kwiMbuynow YN-035P. Sijongene ne isixhobo esenziwe ngeplastiki Mnyama ngeethoni zematte ezimnandi ekuphathweni. Babo Iikona ezijikeleziweyo benza imigca yakho ithambe.
Kulo Inxalenye engaphambiliYena, embindini, sifumana ifayile ye- Umbhalo wesiginesha waseMbuynow. Kwaye kwicala lasekhohlo likhoyo Ii-LEDs ezine ezalisekisa umsebenzi obalulekileyo. Ngokungabinaso isikrini, ezi zibane sinike ulwazi malunga nenqanaba lebhetri iyafumaneka.
Nge Izibane ezi-4 khanyisile siza kuba nayo phakathi kwe-100% kunye ne-75% yomthwalo. Ukuba bavula kuphela Izibane ezi-3 inqanaba lokuhlawuliswa phakathi kwama-75% nama-50%. Con Izibane ezi-2 zikhanyisiwe siya kuba nokufumaneka phakathi kwe-50% kunye ne-25% yebhetri iyonke. Kwaye kuphela 1 yezibane, Ibhetri idibana nefayile ye- Iipesenti ezingama-25 okanye ngaphantsi yobungakanani bayo. Ilula kwaye kulula ukuyilawula.
Kumda we phezulu sifumene iqhosha elinye elenza umsebenzi omnye. Ukucofa kuyo Ii-LEDs ziya kukhanyisa ezibonisa inqanaba lebhetri. esinokuxhomekeka kwizibane ezikhanyisayo.
Ukuba ufuna ibhetri ephathekayo ekwaziyo ukuhambisana nawe Cofa apha kwaye uyithenge kwiAmazon ngaphandle kweendleko zokuhambisa.
Izibuko lokutshaja izixhobo ezininzi ngaxeshanye
Kwicala lasekhohlo ngamazibuko kunye nonxibelelwano. Si amazibuko amabini okuphuma e-USB apho sinokudibanisa nasiphi na isixhobo esifuna ukulayisha. Sikwanayo Ungeniso oluncinci lwe-USB port. Kwaye ikota Uhlobo lwe-C olumiselweyo lwe-C oko kuyakusinceda ukutshaja ibhetri okanye ukutshaja isixhobo esixhunyiwe.
Kwi ngasemva Sifumana, siprintiwe kumphezulu wendlu, i iinkcukacha zobugcisa bebhanki yamandla. Apha sinokujonga ukungqinelana nongeniso kunye namazibuko okuphuma kunye nemilinganiselo eyahlukeneyo nganye nganye.
IMbuynow YN-035P, sukuvumela isingqisho ukuba siyeke
Ngebhetri ephathekayo iMbuynow siyakuhlala sibhatala i-smartphone, itablet okanye ilaptop yethu. Y ukuba ne-100% yayo ye-20.000 mAh ekhoyo, intlawulo enye yeeyure ezi-3 iya kwanela.
Sinokudibanisa izixhobo ezimbini ukuze sibize nga xeshanye ngezibuko le-USB. Kwaye ukuba sineMacBook okanye ilaptop efanayo kunye nokutshaja kohlobo C lwe-USB, sinokuyibiza kwangaxeshanye. Ukutshaja zonke izixhobo zakho ngaxeshanye naphi na apho ukhoyo. Okanye ubize i-smartphone yakho yonke imihla iveki epheleleyo ngaphandle kwesidingo sombane.
Itheyibhile yeeNkcukacha zeBhetri yeMbuynow YN-035P
Uhlobo Lwebhetri lithium ion
Ilayisha umthamo 20.000 mah
Uhlobo lwe-C lokufaka lwe-USB DC5V/3A 9V/2A 15V/2A 20V/1.5A
Iziphumo ze-USB Type C DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A
Iziphumo ze-USB 1-2 Inkcazo: DC5V / 3.4
Tamaño X x 185 80 22 mm
U bunzima 540 g
Ixabiso 39.99 €
Ikhonkco lokuthenga: IMbuynow YN-035P
Sebenzisa amava, izinto ezilungileyo kunye nezibi
Emva kweeveki ezimbalwa kuvavanywa ibhetri yeMbuynow YN-035P singayitsho loo nto Iziphumo zakho zifikelela kulindelo. Ibi Iyakwazi ukunika umthwalo opheleleyo kwi-Motorola Moto G ye-smartphone ukuya kuthi ga 7 maxesha. Ukunikezela ngokujikeleza ngokukhawuleza.
Kwelinye icala, lUkutshaja ibhetri ngokwayo, edityaniswe kwimithambo, kugqitywa ngeeyure ezi-3 kunqabile. Ixesha elifutshane apho sinokufumana kwakhona i-100%. Iinkcukacha ezinje ngale zenza ukuba ibhetri yeMbuynow ibonakale kukhuphiswano.
Ubungakanani obutofotofo kunye nemilo enxitywayo epokothweni yobhaka ngaphandle kokuthatha indawo eninzi. Ayifanelekanga ukunxiba ibhulukhwe, kodwa sinokuyifaka kwityesi yokuhamba ngaphandle kwengxaki.
La Ukukwazi ukutshaja izixhobo ezininzi ngaxeshanye yenza ngcono kunabanye. Ukukwazi ukubiza ithebhulethi kunye ne-smartphone kwangaxeshanye kuthetha ukuba siphulukana nexesha elincinci.
Ulwalamano oluhle I-20.000 mAh yokutshaja amandla ngexabiso.
Ubukhulu kunye nokumila
Ukutshaja ngaxeshanye izixhobo ezininzi
Ixabiso elifanelekileyo lemali
Ubunzima, inobunzima obungaphezu kwesiqingatha sekhilogram kule meko, ihlala isezona ngxaki zinkulu zolu hlobo "lwentlebendwane", into ethi nokuba ikwazile ukuba nobungakanani ikhule ngokuxhomekeke kubungakanani enokubunikela.
UbungakananiNangona inde kwaye kulula ukuyigcina, ibinokuba icinezelwe kancinci. Sitshilo kwi-pros ukuba ayibobukhulu bubi, kodwa kukho ezinye iindlela ezincinci kwintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » Ukuphonononga ibhetri ephathekayo iMbuynow YN-035P
Ungayitshintsha njani iakhawunti yakho ye-Instagram kwiakhawunti yeshishini
Utshintsha njani ubushushu bombala kwiscreen kwi-Android